Ikhaya leholide eMittligada
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguBarbara
Indawo yendlu ikhethekileyo. Kusekupheleni kwelali, ngoko kuthe cwaka. Ngenxa yendawo ephakamileyo kancinane, umntu ujonge ilali yaseWalser egcinwe kakuhle yaseTenna kwaye unokonwabela umbono omangalisayo weentaba zeGraubünden.
Indlu ikufuphi ne-ski lift.
Indawo ebekwe kakuhle yokukhenketha ehlotyeni okanye ukhenketho lokutyibiliza ebusika.
Indlu inikwe kuphela izinto ezikumgangatho ophezulu kakhulu kunye nezixhobo. Isitovu selitye lesepha senza umoya opholileyo.
Indlu iqaqambe kakhulu ngenxa yeefestile ezinkulu ezingaphambili.Ikhitshi lixhotyiswe ngezixhobo zangoku. Ifriji enendawo yesikhenkcisi, umatshini wokuhlamba izitya, i-combi steamer kunye ne-induction hob enehobho ezine ziyafumaneka.
Amagumbi okuhlambela amabini abanzi kakhulu kwaye anezixhobo ezintle, ibhafu kunye neshawari yase-Amazon.
Iibhedi zazenziwe ngamaplanga asekuhlaleni avela entlanjeni.
I-Tenna yilali entle, enelanga kakhulu ezintabeni.
Uhambo lokutyibiliza olulungele abantwana lumalunga nama-300m kuphela. I toboggan run iqala ngqo ngaphantsi kwendlu. Umjikelo wolonwabo oluninzi kwikhephu ukwakwindawo ekufutshane. Emva kokuzonwabisa kwikhephu, unokufudumala kwi-piste bar epholileyo.
I-Tenna ikwayindawo efanelekileyo yokuqala ukhenketho lwekhephu.
I-Tenna kunye neSafien Valley ngummandla omangalisayo wokunyuka intaba ehlotyeni.
I-Egschistausee icetyiswa kakhulu njengendawo yokusingwa yeentsapho.
Kwi-Hotel Alpenblickl unokonwabela ukutya kwendawo okanye, ehlotyeni, uziphathele i-ayisikrimu entle kwi-sun terrace.
Ifama yethu yendalo ikumgama oyi-300m kuphela ukusuka kwindawo yokuhlala.
Iindwendwe zamkelekile ukuba zindwendwele izilwanyana zethu okanye ziziyolise ngezimuncumuncu zengingqi kwivenkile yasefama.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$545